ကာရေဂါ vs ရွိုင်ကိန်း ပွဲပြီးတော့ ကာရေဂါ vs ဖာဒီနန် ရန်ပွဲ ထပ်ဖြစ်နေတဲ့ အွန်လိုင်း စကားတိုက်ပွဲများ - xyznews.co
ကာရေဂါ vs ရွိုင်ကိန်း ပွဲပြီးတော့ ကာရေဂါ vs ဖာဒီနန် ရန်ပွဲ ထပ်ဖြစ်နေတဲ့ အွန်လိုင်း စကားတိုက်ပွဲများ
ချဲဆီး 1-1 ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲစဉ် အဖြစ် Sky Sports ရဲ့ အစီအစဉ် တင်ဆက်မှုမှာ ကာရေဂါ နဲ့ ရွိုင်ကိန်း တို့ အပြန်အလှန် ငြင်းခုန်ခဲ့ကြတဲ့ ကိစ္စဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဆူဆူညံညံ ဖြစ်သွားခဲ့ ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ရိုနာဒို ကို အရန်ခုံမှာ ချန်ထားခဲ့တာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြင်မတူခဲ့ကြရာနေ စတင်ကာ ဒေါသ တကြီးနဲ့ ဆွေးနွေး ငြင်းခုန်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းဖန်စွဲ မရှိတဲ့ ဘောလုံးချစ် ပရိသတ် အများစုကတော့ သူတို့ နှစ်ယောက် ရဲ့ Debate နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောကျခဲ့ကြကာ ၊ မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်တွေကနေ ဆွဲကိုင် ငြင်းခုန်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်လို့ ကြည့်လို့ ကောင်းလွန်းတယ်လို့ မှတ်ချက် ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Sky Sports ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်မှု သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး အငြင်းခုံမျိုးလို့တောင် တင်စားသွားခဲ့ ပါတယ်။
သို့သော် ပြသနာတွေ က အဲဒီလောက်နဲ့ ရပ်တန့် မသွားခဲ့ပါဘူး။
လီဗာပူး နဲ့ ယူနိုက်တက် တို့ အကြားက ပြိုင်ဆိုင်မှု အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ရွိုင်ကိန်း ရဲ့ ကစားဖော်ဟောင်းတွေကပါ ထပ်ပြီး ဝန်းရံလာကြတဲ့ အတွက် အွန်လိုင်းပေါ်က စကားလုံး တိုက်ပွဲတွေဟာ အရှိန်အဟုန် ထပ်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက် နည်းပြ မိုက်ကယ် ကာရစ် ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် မှာ ဗီလာရီးရဲ ကို အနိုင်ယူပြီး ရှုံးထွက် အဆင့် တက်ရောက်နိုင်အောင် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဈေးကြီးပေး ခေါ်ယူထားတဲ့ ဆန်ချို ကိုလဲ သူ့ ကိုင်တွယ်တဲ့ ပွဲရောက်မှ ပထမဆုံး ဂိုး သွင်းယူနိုင်အောင် ကူညီ ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကာရေဂါ က ဆိုးရှား တုန်းက အမြဲတမ်း နည်းပြ အဖြစ် ခန့်အပ်ပေးဖို့ အတင်းကြီး တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ ရီယို ဖာဒီနန် ကို ရွဲ့ကာ မိုက်ကယ် ကာရစ်ကိုလဲ စာချုပ် တန်းချုပ်သင့်နေပြီ ဆိုပြီး စတေးတပ် တင်ကာ ကလိခဲ့ပါတယ်။
ရွိုင်ကိန်း နဲ့ အငြင်းအခုန်တွေ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ယူနိုက်တက် ခံစစ်မှုးဟောင်းကြီးကလဲ ကာရေဂါ ရဲ့ ငြင်းခုန်မှု နဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုလို တုန့်ပြန် ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။
“ ကာရေဂါ အနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဆုဖလား ကို ဘယ်လို ဆွတ်ခူးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ မပြောသင့်ပါဘူး။ သူ့ ကစားသမားဘဝမှာ တစ်ခါမှလဲ မရခဲ့ဖူးဘူးလေ။ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ရတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သူ လုံး၀ မသိပါဘူး။ အဲဒီ ဖလားကို ဆွတ်ခူးဖို့ ဘယ်လို ကြိုးစားရတယ် ဆိုတာလဲ သူ နားမလည်ပါဘူး။
ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်အောင် ကြိုးစားပြတဲ့ အသင်းမျိုးမှာလဲ ဦးမဆောင်ဖူးဘူးလေ။
ဒါကြောင့်မို့ သူ့လို ကစားသမားမျိုးက အဲဒီလို အကြောင်းတွေ တသွင်သွင်ပြောနေတာ ကျနော် အတွက် လက်ခံပေးဖို့ တော်တော်လေး ခက်ခဲပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ တခြား ဆုဖလားအကြောင်းတွေပဲ ပြောသင့်ပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ သူက ပရီးမီးယားလိဂ် အကြောင်းတွေ ပြောနေပြီ ဆိုရင် ကျနော်က အသံကို Mute လုပ်ထားလိုက်တာပါပဲ” လို့ ပေါ်ပေါ် တင်တင် ပြောဆိုလာခဲ့ ပါတယ်။
ဘောလုံး ပရိသတ်တွေ ကတော့ ဖာဒီနန် ရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာ ဝင်ဝုန်းကြပြီး “ ဘောလုံး မကန်ဘူးတဲ့ ပရိသတ်တွေက ဘောလုံး အကြောင်း မပြောရတော့ဘူးပေါ့” “မင်းရော ဘယ်အသင်းမှ နည်းပြ မလုပ်ဖူးပဲ နဲ့ နည်းစနစ်တွေ အကြောင်း ဘာလို့ အာရွှီးတာလဲ” “ဖာဒီနန်တော့ အနေနဲ့ လူကြီး လူကောင်း ဆန်ဆန် ပြန်ပြီး Troll သင့်ပါတယ်” စတဲ့ မှတ်ချက် စကားတွေ နဲ့ ဝေဆာလာခဲ့ ပါတယ်။
လီဗာပူး ကစားသမားဟောင်းကြီး ကာရေဂါ ကလဲ ဖာဒီနန် ရဲ့ ပြောဆိုမှု အပေါ် အခုလို ပြန်လည် တုန့်ပြန်သွားခဲ့ ပါတယ်။
“ ငါက ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားတွေ အကြောင်း ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး ၊ မင်းတို့ မြှောက်ပင့်ပေးပြီး ခေါ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ ရိုနာဒို ရဲ့ အပြောင်းအရွှ့ အကြောင်းကို ပြောနေတာ။
ငါက ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား မရဖူးပါဘူး ဒါပေမယ့် Sky Sports က ငါ့ ရဲ့ အမြင်ကို သဘောကျပြီးသားပါ။
ဆာ အဲလက်ဖာဂူဆန် သာ မရှိရင် မင်း ကစားသမားဘဝလဲ ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မန်ယူ နဲ့ အတူ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားတွေ မရတော့လို့ ၊ ချဲဆီး ကို မင်းပြောင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာလေး ထည့်ပြောဦးလေ။ ဒါနဲ့များ သူ့ကိုယ်သူ မန်ယူဖန် အကြီးစားကြီး လုပ်ပြနေသေးတယ်” လို့ ပြန်လည် ရေးသားသွားခဲ့ ပါတယ်။
Previous Article ဒီနှစ် ရွှေဘောလုံးဆု နဲ့ မက်ဆီ ထိုက်တန်ရဲ့လား . . . နောက်ထပ် ရွှေဘောလုံးဆုတွေ ထပ်ရနိုင်ချေရော ရှိသေးလား?
Next Article ကြားရက်ပွဲစဉ်တွေ အတွက် လော်ရိုး ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ